I-Life Line Palm: Ithetha Ntoni Eyakho? Nantsi indlela yokuYitolika - Ukuvumisa Ngeenkwenkwezi
I-Life Line Palm: Ithetha Ntoni Eyakho? Nantsi indlela yokuYitolika
Intambo yethu yobomi yesundu yahlukile kwaye ityhila iimfihlelo ezimangalisayo ezinxulumene nobomi bethu. Fumanisa ukuba ungawutolika njani umgca wakho wobomi kwaye utyhila ntoni ngawe.
Umgca wakho wesundu ulala kwisitya esikhulu segazi esidityaniswe ngqo nentliziyo, isisu kunye namalungu abalulekileyo. Igama lalo ngenxa yendawo yalo entendeni yesandla sethu, kodwa ngokuchasene nenkolelo edumileyo, ayibonisi ukuba siza kuhlala ixesha elingakanani. Lo mgca usixelela impilo yethu, uchaza iimpawu zethu, kwaye utyhila iziganeko ezithile ezibalulekileyo. Kude, kubanzi, iindlela ezinqamlezileyo, masicacise intsingiselo yomgca wobomi bakho!
Ubude bomgca wobomi
Inkangeleko yomgca wobomi
Ubukho bemigca ekhulayo
Zininzi iimfihlelo zifihliwe entendeni yesandla sakho, bafumane apha. Intambo yesandla sobomi ifanelwe ukujongwa ngononophelo kuba ubukhulu bomgca wayo, umgangatho wayo okanye ubude bawo butyhila iinyani malunga nempilo yakho kunye nesimilo.
indlela yobomi 7 imisebenzi
Ngokuchasene nenkolelo edumileyo, ubude bomgca wobomi akukho ndlela imisela ubude bayo. Ikwazisa ngokubaluleka kwakho. Funda malunga nokuba kuthetha ntoni ukwahluka komgca ngamnye:
1. Umgca omfutshane: Uswele amandla
Imfutshane ibonisa ukumelana ngokomzimba ngokomndilili. Ukuba le yimeko yakho, kuya kufuneka uphinde ubuye emva komzamo omncinci.
Ikwangumqondiso woburhalarhume kunye nobushushu.
2.Ulayini omde: Unempilo entle
Umtya omde kakhulu, ukuya kuthi ga apho uchukumisa khona isihlahla sakho, uyakubonisa oko womelele emzimbeni kodwa noko uneentloni. Lumka ungazicimi kwiindawo zakho zentlalo.
Ukuba umgca wakho mde kwaye uphawulwe kakuhle, luphawu lwe ibhalansi kwaye uzinzo.
Ukuba iphelela ngaphantsi kwesithupha, kunjalo ubungqina bokubaluleka okukhulu, impilo entle kunye namandla aneleyo okujongana nabo bonke ubunzima bobomi.
- Funda Ukufunda Iintende Zesandla Sakho -
Unjani umgca wobomi ofanelekileyo?
Umgca ococekileyo Ujikeleze iNtaba yeVenus ngaphandle kokufikelela esihlahleni ngowona mgca ungaphupha ngawo. Bubungqina be Ubomi obungapheliyo.
Inkangeleko yomgca wobomi bakho
Iifayile zokutsala kakuhle zezona zilungileyo. Inkqubo ye- intle kwaye ubukhali zingakumbi yomelele kwaye ndinamandla ungu. Kuba lo mgca umele isisu kunye namalungu abalulekileyo, xa utsaliwe kakuhle, kubonisa ukuba ezi amalungu akwimeko entle. Ikwabubungqina bokomelela komzimba, intando enamandla kunye nokuzimisela.
Ukuba ngokuchaseneyo, umgca wakho ubuthathaka, awunakho ukuxhathisa komzimba, ungomnye umntu okulo impilo ebuthathaka.
Umgca obhityileyo kodwa onzulu ubonakalisa ixhala ngakumbi uhlobo luvo.
Okokugqibela, i ububanzi isaphetha, ngcono yakho amandla iya kuba.
Ukuba umgca wakho yahlulahlula ibe ngamakhonkco okanye amaqhekeza amancinci isisu sakho kunye nempilo yakho zibuthathaka.
Umgca okhohlakeleyo uyabonisa izigulo ezilandelelanayo okanye ezingapheliyo. Impilo yakho nayo ibuthathaka ngokubanzi.
Ukuba uqaphela i-v amandla afanelekileyo emgceni, bubungqina bokutshintsha komlinganiswa.
Ukuba umgca uyi yaphukile, okanye phakathi kwamacandelo amabini, inokubonisa a ingozi yokufa okanye ukugula kakhulu.
Ngokukodwa, ukuba kunjalo c ut ngaphaya komnye umgca, ibonisa ukufa ngequbuliso.
Ukuba iyafana, imigca ephindwe kabini, okanye emithathu, Ithuku lakho lokusinda liyomelezwa.
Ubukho bamasetyana *
Ukuba amasetyana akwi ukuqala yomgca wobomi bakho, zibonisa ubutyebi.
Ukuba amasebe akwi phakathi kumgca wobomi bakho, lindela a Ukubuyiselwa umva kwe thamsanqa.
Ukuba amasebe akwi isiphelo yomgca wobomi bakho, baxela ukwaluphala kubunzima.
* Amasetyana yimigca eqala kumgca wobomi.
Ubukho bemigca enyukayo *
Umgca oya kwi Umgca wentloko ibonisa impumelelo kufezekiswe ukusebenza nzima okanye ubukrelekrele.
Umgca oya kwi umgca wentliziyo ibonisa ubomi obulawulwa ngu iimvakalelo.
Umgca oya kwi Ilanga Intaba ibonisa impumelelo kunye nobutyebi.
Umgca oya kwi Ithafa laseMars (unxantathu embindini wesandla) yazisa ubunzima. Ubomi bakho buza kuba ngumzabalazo wokwenene!
Umgca oya kwi INtaba yeNyanga ibonisa isigulo esinganyangekiyo.
Umgca oya kwi INtaba yeSaturn ibonisa ukuba uya kuba nakho ukufikelela kwifayile ye- isikhundla esiphakamileyo sobunkokeli.
* Le yimigca esuka kulayini wokuya kwenye imigca.
1 ubomi 1 uthando
Xa isolulela kwi INtaba kaJupiter, eyakho izicwangciso namabhongo ndiya kuhlala ndikuthanda.
Umgca wobomi kufutshane nobhontsi ibonisa ukubanda kunye Intliziyo engenaluvakalelo.
Ukuba umgca wobomi ngu usikwe ngumgca wekamva, intlekele okanye intlekele iya kuphawula ubomi bakho.
Umgca oqala kwi Intaba yeVenus kwaye iphela kwifayile ye- Ithafa laseMars ngelixa uwela umgca wobomi ubonisa ixhala nosizi.
Umgca uwela umgca wobomi, umgca wentloko kunye nentliziyo ngentambo ngaxeshanye luphawu lwe ukuphazamiseka okanye utshintsho yemeko.
Mfutshane, imigca ebukhali bonisa ukuba iinzame zakho ziya kuba uvuzwe.
Umzimba wethu uyamangalisa! Sukuma apho, fumana intsingiselo ye unobumba M entendeni yesandla sakho . Funda malunga Iintsingiselo zeemole.
U-Yelahiah, iNgelosi yoMgcini efuzisela uloyiso kunye nesibindi
Uthando lwenombolo ye-4444
Imole yomlomo enentsingiselo